Ogaden News Agency (ONA) – Fargo – Ololaha loogu magacdaray –I Care- oo Jimcihii lagu soo qaaday tacadiyada Ogadenya ka jira
Fargo – Ololaha loogu magacdaray –I Care- oo Jimcihii lagu soo qaaday tacadiyada Ogadenya ka jira
Tobanaan ka mid ah S.Ogadenya ayaa ku banaabaxay dhismaha Federaalka Mareykanka ee magaalada Fargo.
Kooxdan oo ka mid ah Jaaliyadda Ogaden-American ee Minnesota ayaa ka cabanayay balaayiinta ay dawladda Mareykanka u siiso Itobiya dadka ku tabaalaysan abaaraha ku dhaftay Afrika oy sheegeen in lacagtaasi loo wareejiyo hawlgalada meletari ee ka socda Ogadenya oy ku tilmaameen inay tahay – Xasuuq qarsoon – (Silent genocide).
Iyagoo lulaya calanka dalkooda iyo midka midka Mareykanka oo ku labisan funaanado lagu qoray – “I care about Ogaden” ayay ku dhawaaqayeen – Xasuuq dambe ma ogolin – No More Genocide – iyo Ogadenya.
Cabdi Kaahin oo la hadlay saxaafadda ayaa ka codsaday Dawladda Mareykanka inay kala xisaabto xukuumadda Itobiya tacadiyada ay ka wado Ogadenya. Wuxuu yidhi;
“dadka shacabka ah ayay laayaan, dumarkana way kufsadaan.” Isagoo raaciyay inuu xasuuq ka socdo Ogadenya.
Hiba Ducaale oo banaabaxyo badan ka qaybgashay ayaa markii la weydiiyay waxay rabto tidhi;
“in la joojiyo xasuuqa. In la joojiyo taageerada samafalka loo siinayo xukuumadda Itobiya. Iyo inay dawladda Maraykanka arimaha ka socda Ogadenya faraha la gasho.”
Banaabaxan wuxuu qayb ka yahay olole loogu magacdaray – I Care – Waan Danaynayaa -, oo ujeedadiisu tahay in la joojiyo kufsiga, jidh-dlka, adoonsiga, caruurta laga dhiganayo ciidanka iyo dilka dadka shacabka ah ee caalamka. Maalintii Jimcaha ahayd ayaa waxaa shiishka la saaray arimaha Ogadenya ayay yidhaahdeen maamulayaasha ololaha iyo CabdiXakiim Raabi oo daggan Fargo.
Wuxuu sheegay Raabi in isagoo 7 jir ah uu arkay dad inta la safay masjid hortii la laayay. Wuxuuna intaa raaciyay dhibaatada oo idil waxaa sabab u ah xukuumadda Itobiya oo diidan inay wadahadal dhab ah la gasho Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadenya.
Wuxuu yidhi Raabi; “ Xasuuqii dadka shacabka ah wuu sii kordhayaa” waxaana ugu wacan buu yidhi macaluusha ka jirta dalka iyadoo Itobiya ay ay ka joojisay haya’dihii caalamiga ahaa inay tagaan Ogadenya. Wuxuu intaa raaciyay Raabi inuusan jirin hab lacagta cashuurta ah ee nalaga qaado lagagala xisaabtamo Itobiya isagoo sheegay inay u direen –petition- senator Kent Conard ay ka codsanayaan inay dawladda Mareykanka talaabo qaado.
Senator Conar wuxuu ka mid ah lix odayaasha senetors-ka ka mid ah oo warqad u qoray Xoghaya Arimaha Dibadda Mrs Clinton ay ku codsanayaan in culays lagu saaro dawladda Itobiya inay u ogolaato inay tagaan Ogadenya saxaafadda xorta ah iyo haya’adaha caalamiga ah iyo in dagaalka ka dhex socda iyada iyo jabhadda ONLF la dhex galo.
Raabi wuxuu u sheegay saxaafadda inay banaanbaxa-yaasha doonayaan inay dawladda Mareykanka u taageerto shacabka Ogadeenya siday u taageertay shacabka Liibiya.
“waxaan doonaynaa in la badaabdiyo dadka shacabka ah ee Ogadenya.” Ayuu yidhi Raabi
dadka JWXO ee hawshaas wadey guulaysta, sii giijiya.